ရှည်လျားသောသို့မဟုတ်တိုတောင်းသောဘုရားကျောင်း? မည်သည့်သူသည်သင့်အားအကောင်းဆုံးနှင့်ကိုက်ညီပါကိုရှာဖွေပါ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Miguel Serrano | | ရိတ်လိုက်ပြီ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု
လူတို့၏အမြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာကို ပို၍ ဆွဲဆောင်နိုင်မှုနည်းသည့်အခါ sideburns ကဲ့သို့အရေးမပါပုံရသောအရာတစ်ခုခု၏စွမ်းအားသည်မယုံကြည်နိုင်ပါ။ ဆံပင်ပုံစံလိုပဲ Sideburns ၏အကောင်းဆုံးနှင့်ချောမွေ့သောပုံသဏ္ourာန်ကိုကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာ၏ပုံသဏ္byာန်ဖြင့်မှတ်သားထားသင့်သည်မကြာခဏဖြစ်သကဲ့သို့, နှင့်ငါတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဦး စားပေးမဟုတ်။ မှန်၌မိမိကိုယ်ကိုဂရုတစိုက်နှင့်ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျကြည့်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ မင်းမျက်နှာကဘဲဥပုံလား၊
သင်၏မျက်နှာသည်ဘဲဥပုံဖြစ်ပါကသင်၏နားအလယ်ထက်မပြည့်မှီအထိဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကြီးထွားစေပါNiall Horan လိုပဲ။ ၎င်းသည်သင်၏မျက်နှာပုံသဏ္harmonာန်ကိုညီညွတ်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ကြာကြာကြာကြာလေလေ၊ သင်၏မျက်နှာသည် ပို၍ နည်းလေလေဖြစ်လိမ့်မည်။ နား၏အလယ်နှင့်အ ၀ တ်များကြားရှိသင်၏စံပြအရှည်ကိုရှာပါ။ သင်တစ် ဦး သည်ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုရိုက်ကူးခြင်းသို့မဟုတ် rockabilly အုပ်စုတွင်မပါဝင်ပါကအတုံးအားအောက်သို့ချပါ။
မျက်နှာရှည်သောအမျိုးသားများအနေဖြင့်သူတို့၏ဘေးထွက်ဆိုးများကိုတိုစေသင့်သည် အကယ်၍ သင်၏မျက်နှာကိုပိုမိုနှစ်သက်စေလိုလျှင်။ အမှန်မှာ၊ သူတို့သည်တိုတောင်းလေပိုမိုကျယ်ပြန့်သောသင်၏မျက်နှာပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်သတိရပါ၊ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်တစ်ခုလုံးကိုမရိတ်ရ၊ Olly Alexander ကိုကူးယူပြီးအနည်းဆုံးလက်မဝက်လောက်ထားခဲ့ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိခြင်းနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိခြင်း၊
သင်၏မျက်နှာပုံသဏ္harmonာန်သည်သဟဇာတဖြစ်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းသည်ဘဲဥပုံသိပ်သည်းလွန်းလွန်း။ မရှည်လွန်းပါကပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင့်အားဤကဲ့သို့သောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကောင်းများကိုသင့်ထံပေးပို့ခဲ့သည့်အတွက်သင့်မိဘများအားကျေးဇူးတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘေးဖယ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အားပုံမှန်အရှည် (နားတစ်ဝက်)၊ မီလီမီတာအထက်၊ မီလီမီတာကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြံပေးသည်။ မျက်နှာအသွင်သဏ္withာန်ရှိသောသူများသည်မည်သည့်ဘေးထွက်ဆေးကိုမဆိုနှစ်သက်ကြသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » ရိတ်လိုက်ပြီ » အဘယ်သို့သော sideburns မျိုးကိုသင်ပိုမိုဆွဲဆောင်စေ?
ရင်းနှီးသော Varela ဟုသူကပြောသည်
အကြံပေးချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! 🙂မင်္ဂလာပါ
Varela Intimate ကိုပြန်သွားပါ